7 Simple Nzira Muite Fall Murudo
Saka unofanira wawa musoro-pamusoro-zvitsitsinho murume, zvino chii? Matanho pazasi nyore kuchabatsira kuti awire zvakadzama kupfuura iwe.
Danho Simple #1: nguva dzose uchinyemwerera
Kuvheneka kunyemwerera zvechokwadi kakawanda sezvinobvira kuti uone ataurike. Kana kunyemwerera ichi mubairo-kuhwinha yako iri rinopiwa Guy yako kana imwe nguva nenguva, achinyemwerera zvichakubatsira kuti uve kufara izvo zvichaita kuti mukomana wako vanoda kupedza nguva yakawanda nemi.
muromo: Apo kusanganidzana maziso rudo rwenyu, zvishoma nezvishoma nyemwerera kubvumira pakanyenga zvose pamusoro pechiso chenyu. Kamwe anoona, zvachero kutarisa pasi. Izvi zvichaita kuti imi risingadzivisiki.
Danho Simple #2: Ratidzai Best You
Changing nokuti munhu, ndoda munhu ane tikundikane njodzi. Tose tine zvinoshamisa unhu saka wadii zvinosimbisa avo? Kwete chete ichi vachazvirumbidza chivimbo chako asi ndichamuita kuti zvikuru ifadze murume wako.
muromo: Simply vanoedza kutarisa zvakanaka. Chengeta bvudzi rako yakachena uye vachinzi, tiwane siginicha munhuhwi, nguva dzose kuva yakachena kufema, kusakara lipstick, uye nechokwadi wenguvo yenyu yakachena uye rinoenderana.
Danho Simple #3: Iva Zvainoreva
Kuti kuoneka asinganzwisisiki uye risingadzivisiki, uchida kukusiya murume kushamisika pamusoro pako.
muromo: Kana anobvunza pamusoro nyaya yako, chete kumuudza mashoko akadzama mashomanana ipapo kunyemwerera uye uti “vamwe ndichaponesa mumwe nguva”. wo, kumumirira kuti kuonana iwe. Paanodaro, nechokwadi kwete kupindura pakarepo. Kwete chete achaparadzwa kukufunga yose nguva asi iye uchaisawo kumanikidzirwa kuti une zvimwe zvinhu kuti vaite pane dote paari zuva rose.
Danho Simple #4: Nguva dzose kumusiya Achida More
Kusiya murume wako kuda kunyanya nguva dzose pfungwa yakanaka. Kana adimburira kana rikawana stale uye anofinha pamberi, achaita pakarepo kutarisira nguva inotevera iwe hurukuro mbiri.
muromo: Kana zviri mameseji, emailing, kana chiso nechiso kukurukurirana kumisa kukurukura inyerere pamberi kunoitika. wo, nechokwadi kuti kwete obsessively kutaura naye. Kana kuti iwe Iwewo anowanika, iwe muchaonekwa zvakare manikidza.
Danho Simple #5: zvakavanda Flirtti
anodonha dzisinganyatsooneki, kutamba zvahungava hwakaita chichamubatsira kuwana chivimbo ukama kuti imi vaviri kukura.
muromo: Kubatwa akatarisa kwaari vachibva mhiri kamuri, chengeta muviri mutauro wako pachena nokuda angling muviri wako kwaari, uye kana ukawana mukana seka naye. wo, bvuma nekakutya twirl bvudzi rako kana kuruma muromo wako sezvo izvozvo vachamuratidza kuti iwe vanokwezvwa naye.
Danho Simple #6: Iva Anofunga kwaari
Ratidza kuti unoona zvaari kuita uye kupa kubatsira asati anobvunza. Nokuramba ari chiratidzo diki, rupo wako achava kupfuura kumukoshesa.
muromo: Kana ari pakati anofinha chirongwa kana muchirwara, ndichimuratidza iwe hanya nokupedza nguva naye kuchaita kuratidza kuti uri kutsigira uye dzinokurudzira.
Danho Simple #7: Kuva Positive Force In Hwake
Iva nemaonero munhu pamberi pake kubudikidza aiming kuva nemaonero akanaka pasinei nemamiriro ezvinhu kana kukurukura. Zviri nyore chaizvo kuwira murudo munhu zvakanaka maringe munhu anogara vachinyunyuta.
muromo: Nepo vamwe negativity uye kunyunyuta ndiko kukuvara, edza kuramba hwako zvakanaka saka anoyeuka nguva yako pamwe chete noushamwari uye damerau.
Nepo hazvibviri “kuita” munhu anzwe imwe nzira, kuratidza positivity yako uye kutarisira hunhu ichakukurudzira uye kugunzva manzwiro ake mugwara.
Dating uye Ukama Advice – Mutemo Attraction
Kohomedza Date Your – Dress Ubudirire